Nkqu neFlanzi yeNtlanzi efileyo | Martech Zone
Ukukhula kwam ndikhuliswe ngumntu owayenethemba kwaye engenathemba, uMama wam wayengoyena mntu wonwabileyo. Uye waqinisekisa ukuba ndikhuliswe ndinengqondo eninzi, ndinqwenela into elungileyo kuye wonke umntu kwaye ndenza konke okusemandleni am ukunceda abantu baphume. Njengoko ndandiqala ukufunda nokukhula ndambuza malunga nokuba kutheni enceda abanye abantu angabathandiyo kwaye impendulo yakhe yayilula.
Umntu wonke onokubangcono kwaye ukubanceda kunceda uluntu. Khumbula "ukunyuka kwamaza kuphakamisa zonke izikhephe". Andizange ndiyazi ukuba umyalezo wakhe wawungumyalezo omkhulu endiza kuwuthatha xa ndifunda uqoqosho kamva xa ndisiya kwikholeji. Ndaphinda ndafunda ukuba xa kuziwa kuqoqosho, xa izinto zilungile "ukunyuka kwamaza kuphakamisa zonke izikhephe."
Iminyaka ye-boom's ye-90's yangqina uMama wam kunye neeprofesa zam ze-econ bobabini babekrelekrele. Ngaphezulu kweminyaka eli-15 (kude kube ngowama-2008) ukunyuka kwamaza ezoqoqosho kunyuse isikhephe somntu wonke. Uninzi lwamashishini amancinci ngaloo minyaka ayebalasele, abathengi babebaninzi, iingeniso zazintofontofo kwaye ngomzamo othile kwakulula ukuba uphume kwaye ufumane ukulungela kunye namathemba okulungeleyo okukhulisa ingeniso yakho.
Ngo-2008, esinye isiqingatha somyalezo womzali wam saqala ukuba nengqondo. Utata wam ungumfo omkhulu kodwa ngokungafaniyo noMama wam wayemhle kakhulu ekugcineni ingqondo yakhe ijolise kwicala elingezantsi kwinto eyayisenzeka. Umyalezo wakhe kum wahlukile kancinci. Undixelele Nokuba iintlanzi ezifileyo ziyadada. Wayethetha ukuthini xa amanzi esenyuka yonke into inyuka kodwa ayisiyiyo yonke into isikhephe. Inqaku lakhe lalilula ngenene, uqoqosho olubi alubenzi buthathaka, uqoqosho olubi lubhengeza ubuthathaka.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo besifunda ukuhlala nomyalezo kaTata wam. Kwaye ngo-WE, ndithetha uqoqosho lwaseMelika. Sibonile inani elikhulu lamashishini enza izigqibo ezimbi. Kwaye xa amaxesha ayelula ezo zigqibo zazikhangeleka zilungile, kwakungekho ngxaki zokwenyani okanye iziphumo kwizigqibo ezimbi. Kodwa nje ukuba sibethe endleleni, ezo ziphumo zavezwa kwaye amaxesha amaninzi ukubonakaliswa kuye kwakhokelela ekusileleni okuyintlekele.
Njengomqeqeshi wentengiso, ndichitha iintsuku zam ndisebenza nabanini bamashishini ababona icala elitsha kwishishini labo. Abathengisi ababecinga ukuba bakhulu babonakala bengenzanga nto ngaphandle kokukhwela kumjelo wabathengi abambalwa ababekhula. Abathengisi ababezimisele ukunciphisa ixabiso elincinci kumaxesha amnandi bayabulawa ngoku bengenanto yokubuyela umva ngaphandle kokusika amaxabiso.
Abo bathengisi bebengakhange babenethemba eliqinisekileyo baye babukela ukuwa kwevolumu yabo ngoku xa abo bakhuphisana nabo bezingela iiakhawunti zabo. Iminyaka emibini edlulileyo obu buthathaka bungenakuba bubalulekile, uqoqosho belomelele, abathengi bebaninzi kwaye iimida zisempilweni. Uqoqosho lwalukhula kwaye luneenkqubo zokuthengisa ezibuthathaka kwaye amaqela okuthengisa angalunganga ayingxaki, kodwa zazingenangxaki zinkulu ngokwaneleyo ukuba zingalungiswa.
Namhlanje kwahlukile, ishishini lakho libanjiwe. Iqela lakho lokuthengisa lilawula ikamva lakho kwaye ngaphandle kokuba uyazi ukuba basebenza kwisicwangciso esifanelekileyo, kulwakhiwo olufanelekileyo kwaye banezakhono ezifanelekileyo nkqu nokubuyiselwa kuya kuba ngumceli mngeni.
tags: Ukuthengisa ibluetooth
Novemba 22, 2009 ngo-2: 53 PM
Yithande intetho. Ngaba sisalamane esisondeleyo "Nokuba iwotshi eyaphukileyo ilungile kabini ngemini?"